Can ငါပြင်သစ်ခုနှစ်တွင်လက်ဝဲခရီးဆောင်သေတ္တာတည်နေရာကိုရှာပါဘယ်မှာ? | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > Can ငါပြင်သစ်ခုနှစ်တွင်လက်ဝဲခရီးဆောင်သေတ္တာတည်နေရာကိုရှာပါဘယ်မှာ?
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 31/07/2020)
ပြင်သစ်ဆွဲဆောင်မှုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရန်နေရာဖြစ်သည်. ပဲရစ်အတွက်အထင်ကရ Eiffel မျှော်စင်ကနေ Nice ၏ pebbled ကမ်းခြေရန်, မမှအဆုံးမဲ့အရာတိုင်းပြည်. သင်တို့မူကားတစ်ဦး layover အပေါ်သွားရောက်လည်ပတ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုပါလျှင်, သို့မဟုတ်သင်ပြီးသားသင့်ဟော်တယ်ထဲက check လုပ်ထားကြပါပြီနှင့်သင့်မီးရထားနာရီမချန်မထားပါဘူး? အဲဒီအစားကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများတစ်လျှောက်လုံးကသင့်အိတ် hauling ထက်, သင့်ရဲ့အိတ်စွန့်ခွာခြင်းနှင့် yo ခံစားရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်သစ်န်းကျင်တစ်ဦးဘယ်ဖက်အိတ်တည်နေရာကိုရှာဖွေur နေ့က ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး-အခမဲ့.
ကျနော်တို့တောင်းသည်အတိုင်း, တိုင်းပြည်ကသင့်အိတ်စွန့်ခွာရန်နေရာများနှင့်ပြည့်စုံသည်, သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးအရာမှထွက်ရှာဖွေသင့်ရဲ့အခြေအနေအပေါ်မူတည်သော်လည်း.
သင်တစ်ဦး layover အပေါ်တစ်ဦးမြို့သွားရောက်လည်ပတ်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏အိတ်တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ရွေးချယ်စရာများများရတယ်. ပဲရစ်နှစ်ခုအဓိကလေဆိပ်ရှိပါတယ်, Charles de Gaulle (CDG) နှင့်ပဲရစ် Orly (ORY), terminal ကိုအတွင်းနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုကိုအိတ်သိုလှောင်မှုနှစ်ဦးစလုံး. အများစုမှာအဓိကလေကြောင်းလိုင်းချားလ်စ် De Gaulle သို့ပျံသန်း, အထူးသဖြင့်အရောင်းအဝယ်ပြုရာတွင်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်, အနိမ့်ဘတ်ဂျက်လေကြောင်းလိုင်းပဲရစ် Orly သို့ပျံသန်းလေ့နေစဉ်. မည်သို့ပင်သင့်လေဆိပ်များ, သင်သည်သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်အပြီးသင့်ရဲ့အိတ်ကောက်နှင့်မြို့တော်သို့ဦးတည်ရှေ့တော်မှာလုံလုံခြုံခြုံသူတို့ကိုပယ်စက်စက်နိုင်ပါတယ်.
Charles de Gaulle မှာ, သင်ရထားဘူတာရုံအနီးရှိ Locker တွေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, အရာအထူးသဖြင့်က. သိုလှောင်ခြင်းကနေရရှိနိုင် 06:00 သို့ 21:30, ဒါတည်နေရာအပိတ်များမတိုင်မှီပြန်လာရန်သေချာစေပါ.
ပဲရစ် Orly အလားတူအခြေအနေ, မဝေးတော့တဲ့ရရှိနိုင်ပါဘယ်ဖက်အိတ် options များနှင့်အတူ ဘူတာရုံ. စျေးနှုန်းများအများအပြားအချက်များပေါ်တွင် မူတည်. ကွဲပြား, ကျန်ရစ်အပိုင်းပိုင်းနှင့်အရွယ်အစားအပါအဝင်, ဒါဟာအလုံးစုံကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော်လည်း. hours CDG ကဲ့သို့တူညီသောများမှာ, မှ 06:00 သို့ 21:30, ဒါကြောင့်သင်နေ့ချင်းညချင်းကိုသင်အချိန်ပေါ်ရောက်လာသေချာသည်သင်၏အိတ်စွန့်ခွာလိုကြသည်မဟုတ်လျှင်.
ပြင်သစ်အတွင်းရှိအခြားလေဆိပ်တူညီသောလမ်း operate, အများဆုံးလေဆိပ်ရရှိနိုင်အိတ်ကို options များနှင့်အတူ, Nice အပါအဝင်, လိုင်ယွန်, နှင့် Marseille. သိုလှောင်မှု options နဲ့စျေးနှုန်းတွေအဘို့သင့်ဒေသခံလေဆိပ် Check.
သငျသညျအစားမီးရထားဘူတာရုံမှတဆင့် transiting နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျရှေးခယျြစရာတစ်ခုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်နှင့်အတူတင်ပြကြသည်. ပဲရစ်အတွင်းမှာပဲ, Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare de Lyon, Gare Montparnasse, နှင့် Gare de Marne la Vallee Chessy အားလုံးကမ်းလှမ်းမှုကိုအိတ်ရွေးချယ်စရာ left, အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းရန်ယှဉ်ပြိုင်နှင့်အတူ.
ဤဝန်ဆောင်မှုများများအတွက်စျေးနှုန်းများကွဲပြား, ပထမဦးဆုံးအများအတွက် Flat-နှုန်းကိုအခကြေးငွေနှင့်အတူ 24 နာရီ, နှင့်အများဆုံးသိုလှောင်မှုအချိန် 72 နာရီ. အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းစျေးနှုန်းများများမှာ: small locker €5.50; အလတ်စား Locker € 7,50; ကြီးမားသော Locker € 9,50. တစ်ခုချင်းစီကိုအပိုဆောင်း 24 တစ်နာရီကာလ€ 5.
အရှေ့ကနေရောက်လာသူများအတွက်: Gare de l'Est level -1 Hall Central opposite toilets from 06:00 သို့ 23:45 နေ့စဉ်
တောင်ပိုင်းကနေရောက်လာသူများအတွက်: Gare de Lyon ခန်းမ 3, , rue de Bercy များအတွက်ထွက်ပေါက် 06:15 သို့ 22:00 နေ့စဉ်
လက်ဝဲကမ်းတွင်တည်ရှိသည်: Gare Montparnasse level တဦးတည်း 07:00 သို့ 23:00 နေ့စဉ်
ပဲရစ်တွင်အကြီးဆုံး: Gare du Nord level -1, ကားအငှားလုပ်ငန်းဘေးတွင်, ကနေတက္ကစီထွက်ပေါက်အပေါ် 06:15 သို့ 23:15 နေ့စဉ်
Disneyland မှဦးတည်သူများသည်: ဘူတာရုံ Marne la Vallee Chessy: level 1 - 07:00 သို့ 23:00 နေ့စဉ်
တိုင်းပြည်၏ကျန်တစ်လျှောက်လုံး, များစွာသောရထားဘူတာလက်ဝဲအိတ်နှင့်သင့်ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရန်အဆင်ပြေနည်းလမ်းပူဇော်. ဒါကအပေါ်ခရီးသွားများအတွက်အထူးသဖြင့်ကောင်းလှ၏ Eurail ခရီးစဉ်, အစားဟိုတယ်များထက်ရထားစီးပေါ်တွင်ညအိပ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းသူ. သူတို့ပူဇော်သောအရာကိုအိတ်ရွေးချယ်စရာထွက်ရှာရန်သင့်မီးရထားဘူတာရုံများအတွက်ဒေသခံစာရင်းများ Check. တိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်သကဲ့သို့ ရထားလမ်းခရီးသွား, လမ်းကြောင်းရာပေါင်းများစွာအားလုံးအဓိကမြို့ကြီးများနှင့်မြို့များကိုဆက်သွယ်ထားသောနှင့်အတူ, you can find left luggage locations all over France.
စျေးနှုန်းများယေဘုယျအားဖြင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ကြပြီးအိတ်အဘို့အနာရီကနေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည် 24 အစောပိုင်းပိတ်ပစ်ရန်နာရီ access ကို. မီးရထားဘူတာလည်းခရီးသွားများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ option ကိုတင်ပြ, မီးရထားကနေတစ်ဆင့်ခရီးသွားလေယာဉ်ထက်ဝေးနည်းပါးလာကန့်သတ်လိုအပ်ပါတယ်အဖြစ်. သငျသညျရထားထွက်ခွာမတိုင်မီမျှသာမိနစ်ရောက်လာနိုင်ပါတယ် (အစားနာရီ, လေဆိပ်မှာနဲ့တူ), နှင့်သင့်မီးရထားပေါ်ဖွယ်ရှိနေသည်ရှေ့၌သင်တို့အိတ်ဖမ်းပြီး, သင်သည်မြို့၌သင်၏အချိန်တိုးမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြု.
သငျသညျပြီးသားအနည်းငယ်နေ့ရက်ကာလအဘို့မြို့တမြို့သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြရုံယခုထွက်စစ်ဆေးနေနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျကံကောင်းပါစေအတွက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ. သင်တစ်ဦးဧည့်သည်မှန်လျှင်အတော်များများကဥရောပဟိုတယ်များအခမဲ့အိတ်သိုလှောင်မှုပူဇော်, သင့်အိတ် retrieve မှမည်သည့်အချိန်တွင်မပြန်လာနိုင်ပါတယ်. အလားတူအခြားအ homestay ရွေးချယ်မှုမှန်, ထိုကဲ့သို့သော Airbnb အဖြစ်. သူတို့သည်သင့်တမြို့လုံးလေ့လာစူးစမ်းစဉ်ကသင်၏အိတ်ကိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိလျှင်သင့်ရဲ့အိမ်ရှင်မေးပါ.
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, အများဆုံးမြို့ကြီးများမြို့ပတ်ပတ်လည်လက်ဝဲအိတ်ရွေးချယ်စရာပူဇော်, အထူးသဖြင့်အကြီးစားအနီး ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်မှု. အခြို့သောလွတ်လပ်သောန်ဆောင်မှုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းပြင်သစ်တာတစ်လျှောက်လုံးရရှိနိုင်ပါသည်အများအပြားကြီးမားသည့်ကုမ္ပဏီများ.
Stasher: Stasher သိုလှောင်မှုန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဆိုင်များနှင့်ဟိုတယ်များနှင့်အတူခရီးသွားများအတွက်ကိုဆက်သွယ်မယ့်အိတ်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအများဆုံးအဓိကပြင်သစ်မြို့ကြီးများအတွက်ရရှိနိုင်နှင့်အွန်လိုင်းဘွတ်ကင်ခွင့်ပြု, အရမ်းအဆင်ပြေအောင်. ၎င်း၏က်ဘ်ဆိုက်မှာလည်းအလွန်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ရှိုးပွဲတည်နေရာနာရီ, စျေးနှုန်းများ, နှင့်ခရီးသွားများအတွက်၎င်းတို့၏အထုပ်အပိုးကိုလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားမည်တစ်ခုချင်းစီတည်နေရာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းယုံကြည်စိတ်ချနိုင်နိုင်အောင်.
Olibg ः: Holibag အားလုံးပြင်သစ်ကျော်ရရှိနိုင်ပါသည်အခြားကြီးမားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. Stasher ဆင်တူ, ဆိုက်ထိုကဲ့သို့သောစားသောက်ဆိုင်အဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူဖောက်သည်ကိုဆက်သွယ်, ဟိုတယ်များ, နှင့်စျေးဆိုင်ကြောင်းကမ်းလှမ်းမှုအိတ်သိုလှောင်မှု. ကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်စရာရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူ, သငျသညျနီးပါးသင့်ရဲ့အိတ် drop တစ်ဦးပွဲချင်းပြီးတွေ့ရှိရန်အာမခံချက်ရှိပါသည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကိုခံစားနိုင်ပါတယ်.
Nannybag: သငျသညျပဲရစ်တည်းခိုနေတယ်ဆိုရင်, သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလောင်းအစား Nannybag ဖြစ်ပါသည်. မြို့ထဲတွင်အကြီးဆုံးသိုလှောင်မှုဝန်ဆောင်မှု, တရုတ်ပြည်ရဲ့ဒီကနေ့အိတ်ကမ်းလှမ်းမှုနေရာများရာပေါင်းများစွာနှင့် 24 သူတို့အားအပိုနှောင်းပိုင်းကညတစ်နာရီ access ကို. စျေးနှုန်းများကိုပထမဦးဆုံးနေ့အဘို့အိတ်နှုန်းဟာပြားချပ်ချပ်€6ဖြစ်ကြပြီး€ထို့နောက် 4. Nannybag ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာသူက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အာမခံနှင့်သင်၏အိတ်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအာမခံသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, သငျသညျစိတျစုစုပေါငျးငြိမ်းချမ်းရေးရှိသည်သောနည်းလမ်းများ.
သငျသညျကိုလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားသင့်ရဲ့အိတ်ကိုထားခဲ့ပါလိုအကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်, သင်တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးမြို့သွားရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိ တစ်နေ့တာခရီးစဉ် ဒါမှမဟုတ်မတိုင်မီသင်၏အချိန်ပူးတွဲတင်ပြထား နေ့ချင်းညချင်းရထား. လေဆိပ် layovers များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ option ကိုဖြစ်ကြသည်, မီးရထားဘူတာတိုင်းပြည်ပတ်ပတ်လည်ကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအချို့ပူဇော်နေစဉ်. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှခရီးသွားများအတွက်ချိတ်ဆက်ပုဂ္ဂလိကဝန်ဆောင်မှုများကိုအဆင်ပြေပြီးလွယ်ကူသင့်ရဲ့အိတ်ကျဆင်းနေအောင်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ရရှိနိုင် options များပေါ်တွင်သင်၏အိမ်စာလုပ်ဖို့သေချာပါစေ, စျေးနှုန်းများ, နှင့်သိုလှောင်မှုနာရီသင်ပြင်သစ်အတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဝဲအိတ်တည်နေရာကိုရှာဖွေနိုင်အောင်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးတွေ့သည် “Can ငါပြင်သစ်ခုနှစ်တွင်လက်ဝဲခရီးဆောင်သေတ္တာတည်နေရာကိုရှာပါဘယ်မှာ?” အသုံးဝင်သော? အတူစာအုပ် တစ်ဦးကရထား Save သငျသညျပြင်သစ်ရထားလက်မှတ်တွေနှင့်သင့်ခရီးစတင်ပါ!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “Can ငါပြင်သစ်ခုနှစ်တွင်လက်ဝဲခရီးဆောင်သေတ္တာတည်နေရာကိုရှာပါဘယ်မှာ?” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cafes-europe%2F ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အိတ် leftluggage storebags သေတ္တာ ရထားခရီးသွား travelfrance travelfree travelparis